घरमा बसेको बेला लाग्ने चोटपटकलाई यसरी गर्न सकिन्छ ! घरेलु उपचार ! – Samacharpati
घरमा बसेको बेला लाग्ने चोटपटकलाई यसरी गर्न सकिन्छ ! घरेलु उपचार !
काठमाडौँ, २० भदौ । आजको व्यस्त जीवनमा हामी अधिकांश कामहरु हतारमै गरिरहेका हुन्छौं । जसका कारण कहिलेकाहीँ हामीलाई सामान्य चोटपटक लाग्न सक्छ । घरमा चकचक गर्ने केटाकेटी छन् भने त हरेक दिन सामान्य चोट लाग्ने निश्चित छ । केटाकेटीहरु खेल्ने मुडमा ध्यान दिएर हिँड्दैनन् । जसका कारण उनीहरुलाई चोट लाग्छ ।
त्यस्तै घरको कामकाज गर्दा जस्तैः तरकारी काट्दा, सामान सार्दा, किलाहरु ठोक्दा आदि स-साना काम गर्दा धेरै चोटपटक लाग्न सक्छ । कुनै चोट त सामान्य हुन्छ, आफैं निको हुन्छ । तर कुनै घाउ गहिरो हुन्छ, जसलाई निको हुन समय लाग्नुको साथै उपचारको पनि आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै कुनै चोटको लागि त डाक्टर कहाँ नै जानु पर्ने आवस्था आउँछ । त्यसैले काम गर्दा, खेल्दा र हिँडडुल गर्दा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि तपाईंलाई चोट लागेको छ र सामान्य उपचारले पनि निको हुन्छ भने आज हामी चोट लागेको बेला गर्न सकिने घरेलु उपचारको बारेमा जानकारी दिँन्छौं ।
यातायत कार्यालयका प्रमुख सहित तीन कर्मचारी घुससहित पक्राउ